Ambatondrazaka : Miakatra hatrany ny vidin'entana
Ny vary fotsy no tena ahitana izany fiakaram-bidy izany ; manodidina ny 550 Ariary ny iray kapoaka amin'izao fotoana izao. Mitaraina noho izany ireo mpanjifa eto an-toerana.
Mahajanga : Hetsika fanaovam-bakisiny ny biby fiompy
Nanomboka androany alakamisy 23 marsa ny hetsika fanaovam-bakisiny faobe ireo biby fiompy rehetra eto Mahajanga sy ny manodidina.
Haharitra iray volana izany ka ny 02 may izao vao hifarana. Hitety Fokontany ireo mpitsabo biby mba hanala fahasahiranana ny olona.
Tsy mifidy karazana biby ny fanaovana vakisiny mandritra ny hetsika fa rehefa ompiana ao dia azo atao.
Fanafihana mitam-basy : Noraisim-potsiny ry Ndaty
Ravan’ny Polisy eto Moramanga ny andian-jiolahy nikasa hanatanteraka fanafihana mitam-basy tao Ambohimanarivo, Kaominina Ambohibary ny alin’ny alatsinainy teo.
Valo lahy izy ireo, ekipan’i Ndaty ; nandeha taksiborosy niainga avy any Ambatondrazaka. Olona niray fiara tamin’izy ireo no notambazana ho mpitaridia, hanoro lalana. Mbola tao an-tranon’io olona io ihany koa no niangavian’izy ireo hametrahana basy, ary nanaiky ihany koa itsy voalohany saingy efa mahina ka nampandre ny Polisy ny zava-misy, ka natao ny velapandrika.
RN7 Ambalavao Tsienimparihy : Hisy fiatoana mitsitapitapy ny fifamoivoizana
Tanterahana rahampitso maraina ny asa fanarenana ny tetezana ao Morafeno ao amin'ny Distrikan'Ambalavao Tsienimparihy.
Hisy fiatoana mitsitapitapy ny fifamoivoizana mandritra ny tontolo andron'io zoma 24 marsa io.
Ho an'ny mpampiasa lalam-pirenena faha- (Rn7) mandalo amin'ireto ora ireto dia hisy fijanonan'ny fivezivezena amin'ny 6 ora maraina ka hatramin'ny 8 sy sasany, hiverina indray izany amin'ny 10 ora ka hatramin'ny 12 ora. Ny tolakandro dia hiato ihany koa ny fampiasana ny lalana.
“Hoezahana ny famitana izany rahampitso ihany”, hoy ny talem-paritry ny Asa Vaventy. Nambarany ihany koa fa asa fanarenana ihany izao tanterahina izao fa efa miandalana ny fametrahana fivilianan-dalana amin'io faritra io.
Fipoahana tao amin’ny R3A Betongolo : Hiantohan’ny Tafika Malagasy ny fitsaboana ireo naratra sy ny fanarenana ny simba rehetra
Nitondra fanazavana ny teo anivon’ny Tafika Malagasy, mikasika ny fipoahana nahery vaika tao amin’ny Rezimantan’ny Tafondro aro anabakabaka (R3A) Betongolo ny tolakandron’ny alarobia 22 marsa, nanodidina ny tamin’ny telo ora tolakandro izay nampihorohoro ny mponina nanodidina an’i Betongolo.
Sport scolaire : Mahajanga no handray ny fiadiana ny tompondakan'i Madagasikara
Ny 18 hatramin'ny 27 aogositra ho avy izao no hanatanterahana ny lalao famaranana hiadiana izay ho tompondakan'i Madagasikara amin'ny sport scolaire izay handraisan'ny solontenan'ny faritra 22 manerana an'i Madagasikara.
Natao androany ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ity fanatanjahan-tena an-tsekoly ity izay harahina atrikasa mandritra ny 5 andro ka tsy hifarana raha tsy ny 27 martsa izao.
jeudi, 23 mars 2017 15:22
Antsohihy : Un opérateur karana attaqué, il se fait casser la jambe
Une bande armée a attaqué un opérateur karana, vendeur de motos, mercredi vers minuit.
Les bandits ont agressé tous ceux qui se trouvaient à l’intérieur de la maison. Le gérant s'est cassé la jambe. Sa femme et le gardien ont été tabassés.
Antenimieran’ny Varotra Mahajanga : Nahazo toerana betsaka ny GESCIM
Nivoaka ny talata teo ny valim-pifidianana vonjimaika ny amin'izay vondrona hitantana ny tranoben' ny varotra sy ny indostria Mahajanga taorian' ny fifidianana izay notontosaina omaly ihany. Ny vondron'ny mpandraharaha GESCIM no nahazo toerana betsaka satria ny 13 amin'ny 20 dia lasan'izy ireo avokoa rehefa nifaninana tamin'ny FIVMPAMA na ny Fivondronan'ny Mpandraharaha Malagasy sampana Mahajanga.
Nahatratra 111 ireo mpifidy tamin'ny sampana fitantanan-draharaha, 71 kosa ny varotra ary 21 ny indostria. Afaka folo andro vao ho fantatra ny filoha hitantana hitarika ireto ekipa ireto aorian'ny fampiantsoana fivoriana tsy ara-potoana ataon' ireo komity mpikarakara ny fifidianana.
EPP Antanimbarinandriana : Notokanana ny centre bibliothèque sy Multimédia
Notokanana omaly ny centre bibliothèque sy Multimedia EPP Antanimbarinandriana izay notronin’ireo manam-pahefana maro, notarihin’ny filohan’ny repoblika sy ny governemanta miaraka aminy.
Tsy tonga nanatrika izany kosa ny ben’ny tanàna an’Antananarivo, Lalao Ravalomanana satria ity ilay tany izay nampifanolana ny Kaominina an’Antananarivo sy ny fitondram-panjakana izay lasa resa-be.
Tranombokim-pirenena : Fankalazana ny Andron'ny poezia
Notanterahina ny 21 martsa ny andro maneran-tany ho an'ny poezia izay nankalazaina teto Antananarivo teny amin'ny Tranombokim-pirenena Anosy.